ကေမန်ကျွန်းများကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း & ဘဏ်အကောင့်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
ဤဆောင်းပါးသည်ဆြေးြေိံး ကေမန်ကျွန်းများကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး။ ကျနော်တို့ကထူထောင်အကြောင်းကိုလည်းစကားပြော ကေမန်ဘဏ်အကောင့်.
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများတစ်ကိုလိုနီအဖြစ်တစ်ချိန်ကဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းခဲ့ကြသည်ပြီးတော့တစ်ဦးကဗြိတိသျှပြည်ပနယ်မြေတွေကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် Cayman အတွက်မူလတန်း language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘုံဥပဒအစဉ်အမြဲယင်း၏တရားစီရင်ရေးစနစ်အများအတွက်စံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မင်ငွေအခွန်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအတော်များများဟာအခွန်ဆိပ်အဖြစ်ကေမန်ကျွန်းများကိုငါသိ၏။ Plus အားပြုလုပ်များအတွက်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်အားရှိပါတယ် ကမ်းလွန်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ အဆိုပါ ကေမန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီ နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကျင်းပရန်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် privacy နဲ့ကေမန်အခွန်လွတ်အကြိုးခံစားခှငျ့၏။ အကြောင်းမူကား,
ကေမန်ကျွန်းများကော်ပိုရေးရှင်း 1961 ၏ကုမ္ပဏီများဥပဒေအရလည်ပတ်။ သူတို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာဥပဒေများဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်မြောက်မြားစွာကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၎င်းတို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုများတွင်ထည့်သွင်း အများအပြားမှဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်တည်ငြိမ်စီးပွားရေးမှာရှိပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယုံကြည်မှုကိုကုမ္ပဏီများ, ရှေ့နေများ, ဘဏ်များ, အာမခံမန်နေဂျာ, စာရင်းကိုင်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများအနေဖြင့်ထောက်ခံကြောင်းလည်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဒေသခံထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီများကကေမန်ကျွန်းစုများတွင်ထည့်သွင်းသလဲ? နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်ကေမန်ကျွန်းများကိုရွေးချယ်ရခြင်းမှာအကြောင်းများစွာရှိပါသည်။ ကေမန်ကော်ပိုရေးရှင်းခံယူသောအကျိုးကျေးဇူးများ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
တည်ငြိမ်မှု: အစိုးရအစဉ်အမြဲတည်ငြိမ်ခဲ့ပြီနှင့်စီးပွားရေးကြောင့်သူ့ရဲ့လူကြိုက်များဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်, ကမ်းလွန်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှခိုင်မာတဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
စာရင်းပေါက်အဖြူ: တခြားဒါခေါ် "အခွန်ဟေဗန်" ဟုအဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုနဲ့မတူတာကနိုင်ငံတကာအခွန်စည်းမျဉ်းကိုအောက်ပါအတိုင်း။ ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှု Task Force နှင့်စီးပွားရေးပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (သိုထားလိုက်ပါတယ်သောဤOECD ၏) သူတို့ကအနက်ရောင်စာရင်းကပေါ် Cayman အားမရမှ။
အစာရှောင်ခြင်းထဲဆွဲသွင်းပါဝင်: ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသာတစ်ရက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရစည်းမျဉ်းအခွင့်အာဏာခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ချက်စရာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ကနဦးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးကျနော်တို့ကတခြားတရားစီရင်မှုသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်အနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: တစ်ဦးကေမန်ကျွန်းများကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ options များပေးပါသည်။ ဥပမာ, ကော်ပိုရိတ်ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူများဖြစ်ရန်မလိုပါ။
သီးသန့်လုံခြုံရေး: ကျနော်တို့ကေမန်ကျွန်းများအစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကစာရွက်စာတမ်းများဖိုင်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချနှင့်ဆက်စပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်။ ဥပမာရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးကိုမိနစ်များ၏မှတ်ပုံတင်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်တဦးတည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးနှစ်ပတ်လည်ရှယ်ယာရှင်အစည်းအဝေးသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ရှိသည်ဖို့မျှလိုအပ်ချက်ရှိသေး၏။ ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများ၏မှတ်ပုံတင်မည်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များမှာ၏မှတ်ပုံတင်မည်အများပြည်သူကြည့်ရှုရန်ဖွင့်လှစ်မရှိကြပေ။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအကောင့်ကဒီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ပုဂ္ဂလိကရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမရှေ့ပြေးမြို့တော်: နိုင်ငံအများအပြားထည့်သွင်းမတိုင်မီဘဏ်သို့သို့မဟုတ်အာမခံငွေအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်မြို့တော်တစ်ခု (တစ်ခါတစ်ရံကြီးမားတဲ့) သိုက်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများတစ်ဦးအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းအခွန်အဘယ်သူမျှမ: အခါကော်ပိုရေးရှင်းလွှဲပြောင်းရှယ်ယာတတိယပါတီများမှဖို့ရှယ်ယာအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်မဟုတ်လျှင်မျှအခွန်သို့မဟုတ်တာဝန်တံဆိပ်ခေါင်းများ, ရှိပါတယ်။
Allowed ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း: ကေမန်ကျွန်းစုအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုပုကေမန်ကျွန်းစုများသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်စေသည်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းခွင့်ပြုပါ။ နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းမဆိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းတည်ရှိရန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ပေါင်းခြင်းကော်ပိုရေးရှင်းမကြာခဏကမ်းလှမ်းအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ပေးရန်ကေမန်ကျွန်းများတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မင်အတွက်ဆက်လက်ရွေးချယ်ပါ။
လူပျိုညွှန်ကြားရေးမှူး: ကေမန်ကျွန်းများကော်ပိုရိတ်တရားကိုတဦးတည်း-ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်တဦးတည်း-ရှယ်ယာရှင်ကုမ္ပဏီအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, တူညီတဲ့လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဒါရိုက်တာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ဦးစလုံးကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတရားကိုတဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညတ္တိကျမ်း (ကနေထိုင်သူညွှန်ကြားရေးမှူးအပါအဝင်) ကိုအခြားဒါရိုက်တာများ, ရှယ်ယာရှင်များ, ဒါမှမဟုတ်အရာရှိများမလိုအပ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ကေမန်ကျွန်းများကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့်သမုတ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူလာသောကန့်သတ်သတိထားဖြစ်ခြင်းလိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့်ထူးခြားသောဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အခြားကော်ပိုရေးရှင်း၏အမည်နှင့်ဆင်တူမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင်သင်တို့သည်ဤမျှကုမ္ပဏီလုပ်ဖို့လိုင်စင်မဟုတ်လျှင်အာမခံ "," ယုံကြည်မှု "," Chartered "," အာမခံချက်, "" နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ "," ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှု "" ဘဏ် "ကဲ့သို့တော်ဝင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးဖျောပွမအသုံးအနှုန်းဆံ့နိုငျသညျ, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး "သို့မဟုတ်" ကုန်သည်ကြီးများအသင်း "။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်မှီ, သင်တို့၏နာမရွေးချယ်ရရှိနိုင်ပါနှင့်အသုံးဝင်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးသေချာပါစေ။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုများတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်ဒီမှာသင်လိုအပ်အရာဖြစ်တယ်။ သင်တစ်ဦးကေမန်ကျွန်းများမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလိုအလျှောက်ဤပစ္စည်းများကိုပါဝင်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီ 1906 ကတည်းကသောင်းချီကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထူထောင်ခဲ့သည်။ သင်ဤစာမကျြနှာပျေါမှာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့မဟုတ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံကို အသုံးပြု. information ကိုရယူနိုငျပါသညျ။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုများတွင်ထည့်သွင်းရန်, သင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ရှယ်ယာဖလှယ်နှင့်အတူရှယ်ယာရှင်များမှအမြတ်အစွန်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်စေကော်ပိုရေးရှင်း, သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်ဖို့ taxable မရှိကြပေ။ အခွန်အဘယ်သူမျှမအခွန်ရှောင်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကော်ပိုရိတ်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းအပေါ်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိအိမ်ခြံမြေ, ဆုကြေးဇူးကို, ဒါမှမဟုတ်အမွေဥစ္စာကိုအခွန်ရှိပါတယ်။
ကေမန်ကျွန်းများကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်အဖိုးအခအတွက်အရသိရသည် ကုမ္ပဏီများသည်အခကြေးငွေအချိန်ဇယား၏ကေမန်ကျွန်းများမှတ်ပုံတင် ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်ကုန်ကျစရိတ် $ 750 အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ လိုအပ်သည်သောမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များအတွက်အပိုဆောင်းကြေးရှိပါတယ်။
ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများ၏မှတ်ပုံတင်မည်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များမှာ၏မှတ်ပုံတင်မည်အတွက်မှတ်တမ်းများမှပြည်သူ့ access ကိုတားမြစ်သည်။ ရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာအမည်များကိုပုကေမန်ကျွန်းစုတွင်ပုဂ္ဂလိကရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးကေမန်ကျွန်းစုများတွင် operating ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားအစည်းအဝေးများဒေသအလိုက်ကျင်းပဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်ကုမ္ပဏီများဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာ၎င်းတို့၏အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်လိမ့်မည်။
သငျသညျမှတျပုံတငျခွငျး၏လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးပါပြီပြီးတာနဲ့ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိရန်အ turnaround အချိန်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေး turnaround အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုတဦးတည်းမှလေးလက်ထက် မှစ. ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကေမန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူကျနော်တို့ကိုလည်းဖွင့်နိုင်သည် ကေမန်ဘဏ်အကောင့် မင်းကုမ္ပဏီအတွက် ကေးမန်ကျွန်းကိုဖွင့်လှစ်သောနိုင်ငံခြားသားအတွက်ဤအရေးအသား၏အနည်းဆုံးအပ်ငွေ ဘဏ်အကောင့် $ 100,000 ဖြစ်ပါတယ်။ သတိရပါ၊ သင်သည်အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် Cayman ကုမ္ပဏီနှင့်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ထိုပမာဏထက်နည်းသောပမာဏကိုသာသင်သွင်းလိုပါကသင်၏အနိမ့်သိုက်ပမာဏကိုခွင့်ပြုသည့်သင်၏အခြား Cayman ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်။ ကာရစ်ဘီယံနှင့်အခြားဒေသများရှိဘဏ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံမှုများစွာရှိသည်။
ဒါကြောင့်သင်ကကေမန်ဘဏ်အကောင့်ချင်သို့မဟုတ်ရုံကုမ္ပဏီနှင့်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးသည်မှန်လျှင်, ထွက်ရောက်ရှိကျနော်တို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဦးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်အထက်ဂဏန်းတွေထဲကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်နိုင်ပါ။
ကေမန်ကျွန်းများ Corporation အုပ်ချုပ်ပညတ္တိကျမ်း 1961 ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများအင်္ဂလိပ်မိခင်ဘာသာစကားသည်အဘယ်မှာရှိဗြိတိသျှပြည်ပနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုကိုသူတို့ကော်ပိုရေးရှင်းကနိုင်ငံရေး & စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု, အစာရှောင်ခြင်းပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အနိမ့်မှတ်ပုံတင်ကြေးများနှင့်တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းအပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်ကပ်။
ကျနော်တို့ 1906 ဝန်းကျင်ကတည်းကပါပြီ။ သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်သူအတွေ့အကြုံရှိပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံဖြည့်စွက်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖုန်းနံပါတ်တဦးတည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။